မြွေ... သေပီ ~ စန္ဒကူး
၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာအိမ်ပြန်တုန်းက ညတစ်ညရဲ့သန်းခေါင်မှာ... ဘဲအုပ်တွေ အသည်းသန်အော်ပီး အစုလိုက် အိမ်နောက်ဘဲခြံထဲကထွက်ပြေးတယ်။ ကျွန်မတို့တစ်အိမ်လုံးလဲ လန့်နိုးလာတာပေါ့.. အမှောင်ထဲ ဓာတ်မီးနဲ့ လိုက်ကြည့်လဲမမြင်ရဘူး၊ သခိုးလား၊ အကောင်တစ်ကောင်ကောင်လား သို့လော သို့လောနဲ့ပေါ့။
၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလထဲ တစ်ညနေခင်းမှာ အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေထမင်းဖိတ်ကျွေးတဲ့နေ့ညနေ မောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းလဲရှိနေတဲ့ညနေမှာ ကြက်မကြီးက စူးစူးဝါးဝါးအော်ပီး ခွပ်နေတဲ့အသံတွေကြောင့်သွားကြည့်တော့ မှ တရားခံကိုရှာတွေ့တယ်။ မြွေ အကြီးကြီးပါ.. ကြက်ကလေးတွေကိုလာစားတာ ကြက်အမေကလဲ အသဲသန် ကာကွယ်တယ်။ နောက်တော့ မေ့လဲသွားရော.. မာမီက အဲဒီကြက်မကြီးနောက် အိမ်နောက်ဘေး အဆောင် သေးလေးမှာ သတ်သတ်သွားခွဲထည့်ပီး တံခါးလုံအောင်ပိတ်လိုက်တယ်။
ဧည့်သည်နိုင်ငံခြားသားတွေပြန်သွားတော့ မောင်လေးရယ်..မာမီရယ် ကူးသူငယ်ချင်းယောက်ျားလေး က ကြက်မကြီးကို အဲဒီအိမ်လေးထဲကနေထုတ်ဖို့ တံခါးလဲဆွဲဖွင့်လိုက်ရော.. ရှူးးးးး ကနဲ့ မြွေကြီးက ခေါင်းထောင် ပီး အဲဒီအိမ်အသေးထဲကနေထွက်လာပါတယ်။
မောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းက ထွက်ပြေးပါတယ်။ အမှောင်ထဲမှာမို့ မြွေကလဲကြီးတော့ မသတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီနေ့ကနေစပီးတော့ သူငယ်ချင်းက လယ်ယာပစ္စည်းတွေသွင်းတဲ့ သူဆီက မြွေသတ်တဲ့ဆေးမှာပေးခဲ့ တယ်။ ပေါင်ဒါမှုန့်လေးတွေပါ၊ အဆူးလေးတွေပါတယ် တဲ့..မြွေလာတဲ့လမ်းဖြူးထားရင် မြွေကဖြတ်လာလို့ သူ့ကိုယ်မှာအဲဒီအမှုန့်တွေထိမိရင် အဲဒီအမှုန့်ထဲကမမြင်နိုင်တဲ့ ဆူးလေးတွေက မြွေရဲ့ခန္တာကိုယ်ထဲ စူးဝင်ပီး အဆိပ်အဆိပ်ခြင်းမိပီး မြွေက အားနည်းလာပီး သူ့တွင်းထဲမှာဘဲ အပိုင်းပိုင်းပြတ်ပီး သေသွားတာတဲ့။
ဆေးပေးတဲ့သူပြောပြချက်အရပါ.. အဲဒါကို ကူးက ညီမလေးနဲ့တိုင်ပင်တော့ သူကပြောတယ် မြွေကိုအရမ်း ရက်စက်ရာများကျမလားပေါ့။ နောက်ပိုင်းလူကိုပါအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားထိသူကဆိုးလာတော့ အဲဒီ တစ်ကောင်ကိုတော့ အဲဒီဆေးနဲ့ရှင်းလိုက်ရတယ်။ သေသွားလား၊ အိမ်ပြောင်းသွားလား..မသိဘူး။ မတွေ့တော့ ဘူး။
နောက်တစ်ကောင်.. ဒီအကောင်ကပိုဆိုးတယ်၊ ဆေးထိလဲမမှုပါဘူး၊ သူက ကြက်ဥဘဲလာလာခိုးစားတာပါ။
ကျွန်မနဲ့ညီမလေး အဝေးကနေနေ့တိုင်း (၃)လရှိပီ..အဲဒီမြွေကြောင့်စိတ်မအေးရဘူး။
မနက်မောင်လေး အွန်လိုင်းရောက်တာနဲ့..အရင်ကတော့ ပါးပါးမာမီနေကောင်းလားပေါ့ အခုတော့
ဒီလိုနဲ့ မနေ့ညကတော့ မောင်လေးက သူကိုယ်တိုင်အဲဒီမြွေကိုသတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။
မြွေကတော်တော်ကြီးပါတယ်။ အောက်ဆုံးနှစ်ပုံက အဝေးကနေလှမ်းရိုက်ထားတာ.. ကြောက်လို့
11:19 AM Maung: hello
11:20 AM yea
any newsss snake?
11:21 AM Maung: last night i killed the snake
11:22 AM သူက ကြက်ဥလာခိုးစားနေတာ
11:23 AM Maung: yes
me: where picture
11:24 AM Maung: i will send
11:26 AM ကြက်ဥ ၂ လုံးက ဗိုက်ထဲမှာ
11:27 AM me: you careful
cozz if he picture your face
his relatives will come
11:28 AM Maung: some people on the streets သူတို့ စားချင်တယ်ဆိုလို့ ပေးလိုက်တယ်
11:29 AM me: did you smash his head??
11:31 AM Maung: လက်တစ်ဖက်က မှိန်းနဲ့ လည်ပင်းကိုထိုးထားတာ
နောက်တစ်ဖက်က ဒုတ်နဲ့ သူ့ခေါင်းကိုရိုက်တာ
ရိုက်နေရင်းနဲ့ မြွေက မှိန်းကနေလွတ်ပြီးတော့ ပါးပြင်းထောင်လာရော
နောက်တော့ မှိန်းနဲ့ထပ်ထိုးတော့ ငါ့ပဆိုးကျွတ်သွားရော
Maung: နောက်တော့ မှိန်းနဲ့ ထပ်ထိုးတာ သူ့ပါးပြင်းကိုဖောက်သွားတော့ သူဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး
11:32 AM သူသေကိုယ်သေပဲ
11:34 AM you no longyi and
11:35 AM me: haha
Maung: papa want to help
but he is inside home
me: arrrrrr no
Maung: they both worrying for me
me: so you alone kill?
11:36 AM Maung: yes papa bring some sticks for me to kill သူငယ်ချင်းကလဲဝမ်းသာရှာပါတယ်။ မြွေအကြောင်းသူ့မှာတစ်မေးမေးနဲ့ တောင်ကြီးရောက်လဲ စိတ်ပူ၊ တစ်နေရာရောက်တိုင်းအွန်လိုင်းတက်ပီးမြွေအကြောင်းမေး တယ်။ ဒီနေ့တော့ မြွေသေသွားတဲ့အကြောင်းပြောတော့ သူက..
12:35 PM Maung: oh
coz if that medicine powder still in his bodydangerous to eat
Maung: coz that snake came night before yesterday too
မြွေကြီးက ကြောက်စရာ ညီမရယ် ...
အစ်မတို့ဆို မြွေအရှင်လည်း ကြောက်။ အသေလည်း ကြောက် ..
Zoo ထဲက မြွေလည်း ကြောက်တာပဲ ..
ကူးကူး မောင်လေးက သတ္တိ ရှိလိုက်တာ။
မြွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တာ သူသေ ကိုယ်သေပဲနော် ...
ပုဆိုး ကျွှတ်သွားတယ် ဆိုလို့ ရယ်မိသေးတယ်။
ဆောင်းနှင်းတို့ ခြံထဲ ၀င်တဲ့
မြွေကတော့ လင်းမြွေ ..
သရက်ပင်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ငှက်သိုက်ကို လာတာလေ ..
အိပ်တဲ့ ကုတင် တစ်ခုလောက်များ
ရှည်မလား မသိဘူးးး ..
တော်တော် လည်း ရှည်တယ် ..
ဗိုက်နေရာ ကလည်း ပူနေတယ် ..
ကြည့်ရတာ ကြက်သီးတွေ ထသွားတာပဲ ..
အမတို့ခြံထဲလဲ မြွေကနေပါတယ်၊ အိမ်ထဲ ဧည့်ခန်းထိတောင် မြွေကြီးက မျက်စိလည်လည်လာလို့ အဖေက မေတ္တာပို့ ပရိတ်ရည်နဲ့ ရွတ်ဖတ်ပြောလိုက်တာ နောက် အိမ်အပေါ်တတ်မလာတော့ဘူး၊ ခြံထဲကိုလည်း လူသူအိပ်ချိန်မှ ထွက်တော့တယ် ၊ သူ့ခမျာ အပစ်မရှိပါဘူး သူ့အစာအတွက် အစာရှာရတာ ညီမရယ် ၊ သတ်ဖို့ထိတော့ သနားပါတယ် ၊ နောက်ဆို အမအဖေလုပ်သလိုလုပ်ကြည့်ပေါ့ ၊
မမပန်းခရမ်းပြာ... ကူးလဲမြွေကြောက်ပါတယ်။ သူပြောတော့နောက်တယ်ထင်တာ.နောက်မှတစ်ကယ်ပုဆိုးကျွတ်တာတဲ့း).. သူက ငပြောင်..အစကတည်းက အဲဒီမြွေကို သူ မြှားတိုလေးတွေပစ်တာ လေ့ကျင့်ဖို့ ဆေးနဲ့မသတ်ချင်ဘူးတဲ့..
ဆောင်း... ဟုတ်တယ်အရှည်ကြီးဘဲ.. အမြီးဖြတ်မြင် ကိုယ်ဖြတ်မြင်ဆိုတော့အဲလောက်ကြီးမှန်း မသိဘူး..
Tina Kyi.. မရေ. သူများအဲလိုလုပ်တာရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမြွေကလေ တော်တော်ဆိုးတာ..မရဘူးရယ်.. ဆေးမှုန့်တွေဖျန်းတာလဲ သူမလာအောင်..လုပ်တာ..လာတာဘဲ.. ကြက်တွေ ဘဲတွေသတ်နေတော့ များလာတော့လဲ စိတ်တိုလာရော.. လမ်းထိပ်က ဆိုက်ကားသမားတစ်ယောက်လဲ အကိုက်ခံရတယ်... ဆေးရုံရောက်ပီးဘာသတင်းမှ မကြားတော့ဘူး
အထူးသဖြင့် သူ့ကြက်ကလေးတွေ ဘဲလေးတွေ အသက်လုံလုံခြုံခြုံရှိရင်ကျေနပ်ပါပီလေ..
ညီမ မောင်လေး သတ္တိရှိလိုက်တာ..။ အမဆို ကြောက်တာနဲ့ သေမှာ..၊ အန္တရာယ်သိပ်များတာ ညီမ။ တော်သေးတာပေါ့ လူဘာမှ မဖြစ်တာ။
မြွေတွေကလေ အငြိုးလည်း ကြီးတယ်နော်။ တစ်ကောင်သေသွားရင် နောက်တစ်ကောင်လည်း လာတတ်တယ် သတိထားသိလား။ နောက် မြွေက အမည်းကြီး အဲဒါ အဆိပ်များတယ် သူတို့သွေးတွေဘာတွေ သေချာဆေးပစ်နော်။ အိမ်ထဲလေည်း လုံအောင် ပိတ်ထားအုံး တိတ်တိတ်ဝင်နေမှာစိုးလို့ပါ။ ခန္ဓာသုတ်ရွတ်သိလား။
မကောင်းတဲ့ မတရားလုပ် ကြတဲ့ အကောင်တွေ (သူအစာ သူရှာစားပေမဲ့ ပိုင်ရှင်ရှိသည် လူလည်းကိုက်တော့ ) သေတာကောင်းပါတယ်..
သတ္တဝါတစ်ခု ကံတစ်ခုပေါ့၊ မြွေကို ကားနဲ့ ကြိတ်မိဘူးတယ် ဒီနေ့ထိ စိတ်မကောင်းဘူး၊